उच्च अदालत नजिकै बम विस्फोट, वकिल गम्भीर घाइते ! – Online Marg
उच्च अदालत नजिकै बम विस्फोट, वकिल गम्भीर घाइते !
Posted on Thursday, February 13th, 2020 3:14 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
अदालतमा रहेका वकिललाई निशाना बनाएर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउमा रहेको उच्च अदालत नजिकै विष्फोट भएको छ । लखनउको हजरतगञ्ज क्षेत्रमा भएको विष्फोटमा १ जना कानून व्यवसायी वकिल गम्भीर घाइते भएका छन् भने दुई वकिललाई सामान्य चोटपटक लागेको छ ।
विष्फोट भएको स्थान उत्तर प्रदेश विधानसभाबाट केबल १ किलोमिटरको दुरीमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । वकिलहरुको दुई समूहबीचको विवादका क्रममा बम विष्फोट भएको हुनसक्ने स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
अदालतमा रहेका वकिललाई निशाना बनाएर विष्फोट गराइएको जनाइएको छ । लखनउ बार एशोसिएसनका सहसचिव सञ्जिव लोधीले आफूले केही वकिलबारे उजुरी गरेको बदलामा आफूलाई निशाना बनाएर विष्फोट गराइएको दाबी गरेका छन् ।
करिब १० जनाको सङ्ख्यामा आएका मानिसहरुले आफ्नो चेम्बरमा बम फ्याँकेर भागेको उनको भनाइ छ । उनीहरुले फ्याँकेकामध्ये एउटा बम विष्फोट भएको र बाँकी दुई बम भने विष्फोट नभएको लोधीलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका छन् ।
विष्फोटमा लोधीसहित अरु दुई वकिल घाइते भएका छन् । विष्फोटलगत्तै वकिलहरुले अदालतमा बबाल गरेका थिए । अघिल्लो महिनामात्र वकिलहरुले राज्यमा आफूहरुविरुद्ध आक्रमण भइरहेको भन्दै काम ठप्प पारेका थिए ।
प्रहरीले आक्रमणमा जीतु यादव नाम गरेका व्यक्तिको सहभागिता रहेको जनाएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
Posted in विश्व समाचारTagged #लखनउको हजरतगञ्ज